လိင်တံ ကြီး/ရှည် အောင်လုပ်လို့ရလား | ဒီပကျော်(နည်းပညာ)
March 30, 2017 dpakyaw	Leaveacomment
ဒီနေ့တော့ သောက်ဆေး တွေ. ထိုးဆေးတွေ .လိမ်းဆေး . ပန့် တွေရဲ့အားလုံးရဲ့နောက်က လျှို့ဝှက်ချက် ကိုဖော်ထုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ယောက်ျားလေးတိုင်း အော ကား ခေါ် “လူရိုင်းကား ၊ အပြာကား” (PORN) ကြည့်ဖူးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခုစာကို ဖတ်နေပြီဆိုကတည်း က အင်တာနက်ပေါ် မှာ အလွယ်တကူဝင်ကြည့်လို့ရနေပါပြီဆိုတော့ အကြပ်ကိုင်ပြီး မေးမနေတော့ပါဘူး။ ကြည့်ဖူးသမျှ အောကား တွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ လိင်တံ တွေက တော်တော်ကြီးနေတယ် လုို့မြင်မိမှာဖြစ်ပြီး အပြင်က တခြားလူတွေကိုတော့ သွားလှန်ကြည့်လို့မရလို့ ပုံမှန် ဆိုက်က အောကားထဲက ဆိုက်လို့ ထင်မိတဲ့ လူတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အောကားကြည့်ပြီး ကိုယ်က ၆ လက်မလောကမရှိရင်ပဲ လူစင်မမှီသလိုလို ခံစားရနေတဲ့လူတွေ အနေနဲ့ နဂိုရှိတာထက်ကြီးအောင် နည်းပေါင်းစုံစဉ်းစားမိကြမှာပါ။ အများသောအားဖြင့် အောကားဆိုက်တွေမှာ ကြီးဆေးတွေ ထွားဆေးတွေ.လိမ်းဆေး. ပန့်တွေ မျိုးစုံရောင်းချနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ အပြင်မှာလည်း နေရာအများအပြားမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ထင် ကြီးစေတယ်ထင်အောင်လည်း နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ သရုပ်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရှင်းဆုံးပြောရရင် လိင်တံ ကြီးအောင်လုပ်လို့ကိုမရပါဘူး။
နဲနဲ ရှပ်ရှပ်ပြောရင် လိမ်းဆေးတွေ၊ သောက်ဆေးတွေ၊ ပမ့် တွေ ဆိုတာ အားလုံးလိမ်ဆင်တွေ ချည်းပါပဲ။ လွယ်လွယ်နဲ့ဆေးသောက် ဆေးလိမ်းလိုက်လို့ ကြီးသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
သေသေချာချာနားလည်အောင် ဆေးပညာနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားလာတဲ့ အချိန်မှာ အချောင်းက တောင်လာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချောင်း ထဲမှာ ပါတဲ့ တစ်ရှူးတွေက လေဘူဘောင်းနဲ့ အသွင်တူပါတယ်။ လေဘူဘောင်းကို လေမှုတ်ထဲ့လိုက်ရင် တင်းကားလာပြီး လေထွက်သွားရင်ပြန်သေးသွားပါတယ်။ အချောင်း ထဲကိုတော့ လေအစား သွေးတွေ ဝင်ရောက်သွားကာ တောင့်တင်းလာစေပါတယ်။ ဒီတစ်ရှူးတွေက တင်ပဆုံရိုးကနေစဖြစ်ပြီး တင်ပဆုံရိုးနဲ့ ဆက်နေတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်နဲ့ ကြီးအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူပျိုဝင်ပြီး တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်လက် ကြီးထွားလာမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် လူပျို ဝင်တုန်းက ဆိုက်က အရှည်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဖီးဆေး တော်တော်များများကတော့ ရှိပြီးသား ဆိုက်ကို ပိုမိုကြီးအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ပဲ နဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကို အင်အားဖြည့်ပေးတဲ့သဘောပါ။ သွေးများများရောက်တော့ အရမ်းတင်းနေပြီး ပျော့ဖတ်ဖတ်ဖြစ်မနေတော့ပါ။
သတင်းကောင်းကြီး ကတော့ ယောက်ျားတော်တော်များများက ကြီးအောင်လုပ်ဖို့လုိုအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးပညာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ သုတေသနများ အရ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ယောက်ျား အများစုဟာ တောင်နေတဲ့အချိန် ၅.၁ လက်မ နဲ့ ၅.၈ လက်မကြားမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာရှတိုက်မှာဆိုတော့ တော်တော်များများက ၅.၁ နဲ့ ၅.၅ လက်မကြားလောက်ရှိမှာပါ။ ၅.၁ လက်မက မိန်းမတစ်ယောက်ကို သာယာမှုပေးဖို့အတွက် လုံလောက်ပါပြီ။ မိန်းမတွေကို အိပ်ယာထဲမှာ သာယာမှုပေးဖို့ အတွက်က အချောင်းတစ်ခုတည်းက အဓိကကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်အကြိုက် တစ်ယောက်သိဖို့ နဲ့ သူဘာလိုချင်သလဲ ဘယ်လိုလုပ်ပေးစေချင်သလဲသိဖို့ . အချင်းချင်းအပေးအယူတည့်မှသာ သာယာမှုကို အပြည့်အဝ ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ယောက်ျားတွေက သာမန်ထက် တော်တော်သေးနေတာကို ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကလည်း ကြီးနေတာ နဲ့ကြုံရမှာ ထုံးစံပါ။ သေးနေတဲ့သူတွေ အတွက် တော့ ခွဲစိတ်ကုသတဲ့ နည်းက တော့ အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများ အရ သေးလို့ ခွဲစိတ်ကုသချင်တဲ့ လူအများစု ဟာ ပုံမှန် ဆိုက် ထဲ ဝင်နေတက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့် ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသင့်ပါတယ်။ သင်က သင့်အချောင်းကို ရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်လို့ရတာက ချုံရှင်းပေးခြင်းဖြင့် ရှည်တဲ့ အမြင်ကို ရမှာဖြစ်ပြီး ၊ ဝိတ်များတဲ့သူတွေဆို ဝိတ်ချခြင်းအားဖြင့် ဆီးခုံက အဆီတွေ လျှော့သွားလျှင်ပဲ အနဲငယ် ရှည်လာမှာပါ။
တကယ်လို့ သင့်အချောင်းကပုံမှန် ရှိတာကနေ ကြုံ့သွားတယ်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်မှာ ရောဂါ တစ်ခုခုခံစားနေရဖို့များပြီး ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ထို့ အတူ နဂိုထက်ကွေးကောက်လာတာ . ခေါက်ကျိုးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြပြီကုသသင့်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရ လို့တိုသွားတာကို နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်ကုသလို့ရပေမယ့် ကောင်းနေတာကို ရှည်လာအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။
အကယ်၍ သင်ကကျန်းကျန်းမာမာ ရှိပြီး နေတဲ့ အချိန် စွမ်းဆောင်မှု အားမြင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမောခံနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ၊ အဆီပိုများမရှိအောင် အစားအသောက်ဆင်ခြင်ခြင်း ၊ အသီးအရွက်များများစားကာ လူကို ကျန်းမာစေသောအစားအစာများစားခြင်း၊ သကြားများသော Coke, ကျွဲရိုင်း များကို ရှောင်ကြင်ခြင်း ၊ ဆေးလိပ် ဖြတ်ခြင်း၊ အရက် ဘီယာ ကိုလျှော့သောက်ခြင်းများ ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေကို မလိုရင်လုံးဝမလုပ်ဖို့၊ လိမ်စဉ် တွေဖြစ်တဲ့ ဆေးတွေ ပမ့် တွေကို အယုံမှားမိစေဖို မှာချင်ပါတယ်။ ဂေါ်လီထည့်တာတွေ၊ ဆီလီကွန်ထိုးတာတွေက လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကာ အာရုံခံ တွေကို ထိခိုက်နိုင်လို့ ကိုယ်ခံစားရတဲ့ ဖီလင်တွေပါပျောက်သွားစေမှာပါ။ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း နဂို ရှိတာကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်အောင် ဆုတောင်းပေးရင်း …..
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်းအားကျစေဖို့
Previous Postလျှာစွမ်းပြရမှာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်Next Postမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စာပို့ပြီး ချိန်းဆိုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၉)ခု